TVXQ အဖွဲ့မှာ အဖွဲ့ဝင်ငါးယောက်ကနေ နှစ်ယောက်ဖြစ်သွားရခြင်းရဲ့နောက်ကွယ်က ဝမ်းနည်းဖွယ်အမှန်တရား - Pop Channel
K-Pop ပရိသတ်တချို့ဟာ TVXQ ကို အဖွဲ့ဝင်နှစ်ယောက်ပါဝင်တဲ့ duo အဖွဲ့လို့ထင်နေကြပေမယ့် သူတို့ဟာ တစ်ချိန်ကအဖွဲ့ဝင်ငါးယောက်ပါဝင်တဲ့ Boy group တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါဆိုရင် သူတို့အဖွဲ့ဘာတွေဖြစ်သွားခဲ့တာလဲ?
TVXQ ဟာ SM Entertainment လက်အောက်ကနေ ၂၀၀၃ ခုနှစ်မှာစတင်ပွဲဦးထွက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ပွဲဦးထွက်သီချင်း “Hug”ဟာဆိုရင် ဆယ်ကျော်သက်အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့လိုက်ဖက်စွာပဲ ဖြူဖြူစင်စင်နဲ့အပြစ်ကင်းတဲ့ခံစားချက်ကို ရရှိစေပြီး အောင်မြင်ခဲ့တဲ့သီချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက် သိပ်မကြာခင်မှာပဲ “Hug” ရဲ့ပုံစံနဲ့လုံးဝကွဲထွက်နေတဲ့ “Triangle” ဆိုတဲ့သီချင်းတစ်ပုဒ်ထပ်မံထွက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ နူးနူးညံ့ညံ့နဲ့အပြစ်ကင်းတဲ့ပုံစံမျိုးကနေ နက်ရှိုင်းပြင်းပြတဲ့ပုံစံနောက်တစ်မျိုးကို ပီပီပြင်ပြင်လုပ်ပြနိုင်ခဲ့ခြင်းက ဒီ group ရဲ့အလားအလာကောင်းကို သေချာစေခဲ့ပါတယ်။
နောက်ထပ်နှစ်အနည်းငယ်အကြာမှာပဲ သူတို့ရဲ့ Hit Song တစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ “Rising Sun” ထွက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ ဒီသီချင်းဟာဆိုရင် သူတို့ရဲ့‌ရှေ့ဆက်လျှောက်မယ့် အနာဂတ်အတွက် ခြေလှမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ “Rising Sun” ဟာ လူသိများကျော်ကြားခဲ့တဲ့သီချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်လာပြီး Board တွေအားလုံးမှာ ပထမနေရာကနေ Win ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ဟာ ဒီထက်မကပိုပြီးအောင်မြင်လာကြတော့မယ့်ပုံပါပဲ။ ဒီနေရာမှာတင်ရပ်မနေဘဲ အောင်မြင်ပြီးရင်း အောင်မြင်နေတော့မယ့် အလားအလာအပြည့်နဲ့ K-Pop လောကမှာ အခြေခိုင်ခိုင်နဲ့ရပ်တည်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါဆိုရင် သူတို့မှာဘယ်လိုတွေဖြစ်သွားကြသလဲ ? ဘာဖြစ်လို့များ အောင်မြင်နေတဲ့ ထိပ်တန်း group တစ်ခုကနေ တစ်စစီပြိုကွဲကုန်ကြတာလဲ ?
အဖွဲ့ဝင်ငါးယောက်ကနေ နှစ်ယောက်ပဲကျန်နေခဲ့တာ ဘယ်လိုအကြောင်းမျိုးကြောင့်ပါလဲ ?
2009 ခုနှစ်…TVXQ ရဲ့ အောင်မြင်ကျော်ကြားမှုတွေ ပြီးပြည့်စုံနေတဲ့အချိန်မှာပဲ Kim Junsu, Park Yoochun, Kim Jaejoong တို့သုံးဦးဟာ SM Entertainment နဲ့စာချုပ်ကိုအဆုံးသတ်လိုက်ဖို့အတွက် တောင်းဆိုလာခဲ့ပါတယ်။ ဒီကိစ္စဟာ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းကပရိသတ်တွေကို အံ့ဩတုန်လှုပ်သွားစေခဲ့ပါတယ်။
သူတို့သုံးဦးဟာ စာချုပ်ကိုအဆုံးသတ်ချင်ရတဲ့ အကြောင်းပြချက်နှစ်ခုပေးခဲ့ပါတယ်။ ပထမတစ်ခုကတော့ စာချုပ်သက်တမ်းဟာ အရမ်းရှည်လျားလွန်းခဲ့ပြီး တစ်ဆယ့်သုံးနှစ်တာကာလလုံး SM Entertainment မှာပဲ ချည်နှောင်ခံခဲ့ရတာကြောင့်ဖြစ်ပြီး နောက်တစ်ချက်ကတော့ မမျှတတဲ့အနုပညာကြေးတွေနဲ့ သူတို့ရဲ့လုပ်အားနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ အနုပညာကြေးကိုမရရှိခဲ့တာကြောင့်ပါလို့ဆိုပါတယ်။
အဖွဲ့ဝင်သုံးဦးရဲ့ဒီလိုပြောကြားချက်တွေကြောင့် အမှုအခင်းတွေရင်ဆိုင်ခဲ့ကြရပြီး TVXQ ရဲ့ activity တွေအားလုံး ဆိုင်းငံ့သွားခဲ့ရပါတယ်။ ဒီလိုအခြေအနေတွေဆိုးရွားရှုပ်ထွေးနေစဉ်မှာပဲ TVXQ ရဲ့ Activityတွေကိုစီမံတဲ့ ဂျပန်အေဂျင်စီ Avex က ဒီအဖွဲ့ဝင်သုံးဦးကို JYJ လို့ခေါ်တဲ့ အဖွဲ့ခွဲတစ်ခုအဖြစ် ဖွဲ့စည်းသွားမယ်လို့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုအခြေအနေအချိန်အခါမကိုက်ညီတဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်ဟာ နောက်ပိုင်းမှာ JYJ အနေနဲ့ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေ ကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်ခဲ့ရခြင်းရဲ့ အကြောင်းတရားတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
တရားရင်ဆိုင်မှုဟာ 2010 မှာ TVXQ အဖွဲ့ရဲ့ပြိုကွဲမှုကို တရားဝင်ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားခဲ့ခြင်းက ပရိသတ်တွေကိုစိတ်ပျက်ဝမ်းနည်းစေခဲ့ရုံသာမက TVXQ ရဲ့ အနာဂတ်ကိုပါ မရေမရာမေးခွန်းထုတ်‌စရာဖြစ်လာစေခဲ့ပါတယ်။
အဖွဲ့ဝင်အသစ်တွေ ထပ်မံခေါ်ယူသွားမှာလား ? နှစ်ယောက်တည်းပဲ Duo အဖွဲ့အနေနဲ့ဆက်လုပ်သွားမှာလား ? ဒါမှမဟုတ် သူတို့လည်းပဲ ထွက်ခွာသွားကြတော့မှာလား ?
ကံကောင်းစွာနဲ့ပဲ TVXQ ရဲ့ ကျန်ရှိနေသေးတဲ့အဖွဲ့ဝင်နှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Jung Yun-ho နဲ့ Shim Chang-min တို့က Duo အနေနဲ့ ဆက်ရှိ‌ပေးခဲ့ပါတယ်။ ယနေ့အချိန်ထိ သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ အကောင်းဆုံးဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုတွေကို စင်ပေါ်မှာ ဝံ့ဝံ့ကြွားကြွား မြင်တွေ့နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။
TVXQ ရဲ့ဇာတ်လမ်းဟာ ကံမကောင်းခြင်းတွေဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကပဲ K-Pop လောကထဲက ဝမ်းနည်းဖွယ်ရာတွေကို အမှတ်ရနေစေခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ K-Pop လောကမှာ အမြဲတမ်းလှလှပပနဲ့ ကျော်ကြားမှုတွေချည်းရှိနေခဲ့တာမဟုတ်ဘဲ တခြားမျက်နှာတစ်ဖက်လည်းရှိနေသေးတာကို ပြသနေခဲ့ပါတယ်။